Tamin'ny taonjato faha-80 tamin'ny taonjato faha-20, ny fihodinana teo amin'ny akorandriaka dia manavaka ny modely manakaiky ny lohalika. Ny lamaody maoderina dia manolotra loko isan-karazany - hatramin'ny mini-maxi. Noho izany dia manana safidy maro ny zazavavy miaraka amin'ny endrika rehetra.
Karazan'akanjo misy loko falehan-doha
Ny fitambaran-tifitra dia azo jerena amin'ny modela toy ny pensilihazo, skirt-tulip, baolina baolina. Fehiloha misy vala eo an-damosina na any aoriana, matetika dia manana fohy mahitsy, ary amin'ny moron-tsidim-borona, dia azo amerana ny lamba ny vala.
Ny akanjo miaraka amin'ny boribory eo anoloana dia tena mahaliana ary mifanaraka tsara amin'ny vehivavy miaraka amin'ny "apple". Hanintona ny saina ho an'ny tongony mamoafady ary manelingelina amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny faritra ambony sy ambany amin'ny vombony. Azonao atao ihany koa ny misafidy safidy fohy.
Ankizivavy lava mitongilana lava mitongilana no hojerenao tsara amin'ny zazavavy kely sy malefaka.
Amin'ny inona ny manao akanjo miaraka amin'ny fihoaram-pahefana?
Ny vala dia mety ho samy hafa - malalaka sy tery, voapetaka avy eo afovoan'ny feny na avy amin'ny tady. Safidy maromaro momba ny fampidirana am-pirahalahiana ireo modely mitovy amin'izany:
Ny volon'ilay hazavana dia mifamatotra amin'ny tontolon'ny zavatra mitovy. Amin'ny tongony dia tsara kokoa ny mametraka kapa amin'ny savily na volon'ondry.
Ny akanjom- birao madinidra miaraka amin'ny tifitra eo anoloana dia matetika ampiasaina mba hamolavolana birao mifangaro miaraka amin'ny lobaka fotsy, akanjo manga sy jaky. Ny sary misimisy kokoa dia tratra raha mametraka akanjo marevaka sy akanjo mafana ianao.
Tsy isalasalana, ny sokajin'io karazana io dia andianà akanjo miaraka amina vala sy karavato.
Raha mbola tanora ianao, dia afaka mandoa sekoly kely. Ny fomba amam-panao ao an-tsekoly dia mampiseho skirting kirany miaraka amin'ny fako, tavy monophony misy kofehy sy kofehy amin'ny lohalika.
Satria ny mpikarakara dia manolotra kiraro manana vala amin'ny fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny hoditra sy ny tronges, afaka mifangaro miaraka amin'ny pantso sy panty.
Ny haben'ny lamba rongony vavy
Vehivavy mafana volo
Down jacket ho an'ny vehivavy bevohoka - 40 sarin'ny modely tsara tarehy sy tsara tarehy ary tsara tarehy
Hematoma tamin'ny fitondrana vohoka
Toetrandro 39 tsy misy soritr'aretina
Ny akanjo eo amin'ny ety misy lava lava no fiakanjon-jazakely indrindra ho an'ny fashionista maoderina
Mummy avy amin'ny tady marika - fomba fisakafoanana sy crème
Karipetra kely ao amin'ny efitrano ho an'ny zazalahy
The Theatre Royal of Denmark
Maria Sharapova, Adele sy Emilia Clark ao amin'ny lisitry ny kintana mahomby indrindra eo ambanin'ny 30 taona
Kitapo "Napoleon" ao anaty vilia fanosotra